Boqolaal Qaxooti Ah Oo Rabshado Ka Sameeyey Dalka France+SAWIRRO. |
Boqolaal Qaxooti Ah Oo Rabshado Ka Sameeyey Dalka France+SAWIRRO.
Paris(GNN)-Boqolaal qaxooti ayaa shalay isku dayey inay xoog ku fuulaan dooni u socotay wadanka UK oo ka baxeysay magaalada ku taal xeebta France ee Calais.
Ugu yaraan 200 qof ayaa isku dayey inay xoog ku fuulaan dooni rakaab sida ee shirkada P&O Ferries oo xiligaasi taagneyd dekkada magaalada Calais. Balse dadkaasi ayaa ku guuleysan waayey inay doonidaasi koraan, kadib markii laga xirtay irida laga galo doonida.
shalay ayey qaxootiga ku sugan Calais oo gaaraya 2000 qof ay dhigeen rabshado iyo mudaharaad ay uga soo horjeedaan amar kasoo baxay dowlada France oo sheegtay in dadkaasi sharci darada kusoo galay dalka France isaga baxaan xero macmal ah oo ay ka sameysteen nawaaxiga dekkada Calais. Dhamaan dadkan ayaa doonaya inay si sharci daro ah ku galaan wadanka Ingiriiska.
Ciidamada amaanka ee dalka France ayaa bilaabay inay burburiyaan qeybo kamid ah xerada ay dadkan qaxootiga ah degenaayeen, kadib markii ay cabsho ka timid shacabka ku dhaqan magaalada Calais oo sheegay in qaxootigan ay culeys weyn ku hayaan magaalada dhanka nadaafada iyo waliba amaanka.